Siyakwamukela kuAI / ML Demystified Mini-Course! | Infinite Red
Zulu - Kudilizwa AI: 5-Day Mini-Course
Siyakwamukela kuAI / ML Demystified Mini-Course!
Izinhlobo Ezijabulisayo ZeMachine Learning
Izinhlobo zeVisual Machine Learning:
Kungani wonke umuntu ethi GAN?
Izindawo i-AI ezingaya kuzo
Siyakwamukela ku-AI Demystified mini-course. Ezinsukwini ezi-5 ezilandelayo, sizokusiza nge-buzzword-bingo eyi-Artificial Intelligence neMachine Learning.
Ngizoba umhlahlandlela wakho, uGant Laborde.Njengosoftware developer weminyaka engu-20, ngibone ikhodi esukela ekupheleleni iye kwekhathazayo.Ngibone abantu beseqa izithiyo futhi besakha imiqondo yamanoveli, kepha akukho okuqhathanise ngempumelelo nokumangala kwentuthuko yakamuva ku-AI. Ngakho konke okuqukethwe okusha kwe-AI, kulula ukuzizwa ukhukhulwa. Okunye okuqukethwe kungokoqobo, kanti okunye akuyona. Ezinye izinhlelo ziyabonakala, kanti ezinye zigoqiwe ngama-buzzwords angenakungeneka. Ukuze ukwazi ukwenza izinto eziningi zihambe kabanzi, sidinga isisekelo solwazi esingenekayo.
Ngenhlanhla, i-Infinite Red ihlangabezana nokuchaza imiqondo esezingeni eliphakeme, futhi yilokho okusigqugquzele ukuba senze le mini-course. Njengeconsulting firm, umbono wethu nsuku zonke ukuchaza imiqondo ethuthukile ngolimi lwansuku zonke. Ama-devs ethu akuyona abafundi be-Ph.D. noma oprofessor. Sifundisa amaqembu, sikhulume kumaconferences futhi sibhale namablog. Indlela yethu yokuchaza i-AI ngeyokubeka isibonelo.
Njengoba le mfundo iqhubeka, uzofunda imigomo ebalulekile nemiqondo emayelana ne-AI futhi uthole izibonelo eziningi ongazisebenzisa. I-AI umqondo ofinyelela kude, ngakho-ke le mfundo izongena ngaphansi kwamagama awusizo asetshenziswayo namuhla, futhi lokho kusho ukugxila kakhulu kuMachine Learning.
Ngaphandle kokunye, masigxume osukwini 1!
Kuyini i-Artificial Intelligence?
I-Artificial Intelligence imane nje igama elisetshenziselwa ukwenza amacomputer enze imisebenzi ekhaliphile futhi kwesinye isikhathi efana neyabantu efana nokulingisa imicabango yokuphila. Lokhu kungaba lula njengokuthi ube neshadi yokubheka yokudlala i-tic-tac-toe, noma ukubamba izingozi ezisebenzayo kanye nemivuzo yokushaya amakhosi womhlaba ku-Chess and Go.
I-AI yigama lesambulela elifinyelela kude.
I-AI inezigatshana ezimbili ezinkulu: i-AGI, okuyi-Artificial General Intelligence, ne-ANI, okuyi-Artificial Narrow Intelligence. Iningi lezinto ezintsha ezipholile abantu abazisungula namuhla ziwela ngaphansi kwesigaba se-ANI. Lokhu kufaka phakathi ukukhomba abantu nezinto ezithombeni, izimoto zokuzishayela, nokukhiqiza izithombe ezintsha zabantu noma izinto ezingakaze zibe khona! Ngenkathi umqondo wokuqeqesha umshini ukubona izinto ezingakaze zibonwe ngaphambili uhlaba umxhwele, ngeke uqale ukwazi ukuthi uzokwenzenjani ngalokho kwaziwa.
Ukufanekisa okuhle ukuthi i-ANI ngokuvamile ayinazo ingqikithi. Bheka lo mhlobiso ojabulisayo we-Halloween. Ngenkathi sikwazi ukwazisa okumnandi okukulesi sibuko, i-ANI ingahle ikhombe izingxenye zayo bese iphuthe ngokuphelele umongo wokuzijabulisa.
Ayikho imoto ezishayelayo ezokwakha inyunyana noma imibono. Leyo miqondo ebanzi ishiyelwa kwi-AGI, okuvele kube yisisekelo sayo yonke into eyethusayo yezobuchwepheshe ye-Sci-Fi. I-AGI umqondo wokuxazulula ubuhlakani ngokuphelele. Ngenkathi ukuphumelela kwe-ANI kushintsha umhlaba, benza okuncane kakhulu ukusithuthukisa sibheke kwi-AGI.
I-ANI kulapho kuhlala khona iMachine Learning (ML). Yi-artificial narrow intelligence. I-Machine Learning isisiza ukuthi sisebenzise idatha enkulu kakhulu esinayo emhlabeni wanamuhla. Kubandakanya nemishini eshesha futhi esheshayo ukucubungula leyo datha njengomfundisi wama-algorithms.I-Machine Learning inesethi yayo yezigatshana ezimbalwa, kuncike idatha ngayinye ngokuhlukile. Ngokuvamile, noma kunjalo, iMachine Learning isinikeza ulwazi lokuphakamisa futhi uhlanze ama-algorithms, kunokuba abantu benze izinhlobo ezithile zomsebenzi.
Uma umuntu ebekelwa inselelo yokubhala i-algorithm elungisa wonke amaphutha egrama nezimpawu zokubhala, kufanele aqale afunde isiNgisi bese ethola indlela ethile yokufaka lolo lwazi. Bese kuthi, ngemuva kweminyaka yokusebenza, kufunwe ukuthi futhi baxhase ukuloba kwezimpawu zolimi nolimi lwaseSpain. Ngiyaqiniseka ukuthi lowo muntu uzoyeka ngokushesha! Kepha uma saqeqesha i-algorithm ukwenza into efanayo, sinezintaba zezincwadi ezintabeni zezinto esingazisusa kuzo. Kuyashesha futhi kulula kakhulu ukuba nomshini uhlafuna lonke lolo lwazi futhi wenze ithuluzi elifanayo ngazo zonke izilimi.
Lokho kungamandla e-Machine Learning AI. Amacomputer bebelokhu behlaba umxhwele ekwenzeni imisebenzi eyisicefe okungekho muntu ongayinqamula. Esikhathini semininingwane, ukusebenzisa amacomputer ukufundisa, ukubikezela, nokwenza lula ubuchule be-algorithms yimikhiqizo yokwengeza ngaphezu kwanoma yini esiyake saba nayo. Singasebenzisa i-AI ukuthola i-spam, ukubamba i-fraud, ukubona i-handwriting noma ukukhuluma, futhi sivikele nedatha yethu sisebenzisa ubuso bethu.
Kungakho kubalulekile ukuqonda nokuthola le ntuthuko emhlabeni osizungezile. Uma sesiyibonile, singaza nezicelo zayo. Sonke singabadali manje - futhi lokho esikudalayo kukithi!